Company neNkcubeko - Huizhou Jinhaocheng Co., Ltd
Ilaphu elityhidiweyo elinganyibiliki
Ikhaphethi kunye neMats
Kunye neemveliso kwizinga eliphezulu, elikhulu emva-ukuthengiswa kweenkonzo kunye nomgaqo-nkqubo yesiqinisekiso, siya unokumthemba ukusuka iqabane ezininzi phesheya, feedbacks ezininzi ezilungileyo ukwanda mveliso wethu.
Sisoloko ukubambelela yenkampani umgaqo iihambo ze "ngokunyaniseka, umsebenzi, ukusebenza kunye ezintsha", yaye: bonke abaqhubi banandiphe ukuqhuba ebusuku, ukuba abasebenzi bethu ungaziphumeza ixabiso labo lobomi, ukuze ube namandla kunye nenkonzo abantu abaninzi. Sizimisele ukuba abe integrator imalike zethu kwemveliso kunye nomnikezeli inkonzo enye ye imarike yethu imveliso.
Sisoloko kugxininisa intsingiselo yawo yolawulo "lwemiGangatho Okokuqala, Technology Basis, Ukunyaniseka kunye Innovation" .Thina bayakwazi ukuba ziphuhlise imveliso entsha gqolo ukuya kwinqanaba eliphezulu ukwanelisa iimfuno ezahlukeneyo abathengi.
Sibe nenkqubo yolawulo lomgangatho olungqongqo nolupheleleyo, nto leyo eqinisekisa ukuba imveliso ngamnye ukuhlangabezana neemfuno umgangatho abathengi. Ngaphezu koko, zonke iimveliso zethu ziye kuhlolwa ngokungqongqo phambi ngolwandle.
Ubuchule Bethu & Ubungcali
Siya set "kuba ingcali creditable ukuphumeza uphuhliso oluqhubekayo kunye ezintsha" njengoko Isaci wethu. Singathanda ukuba ukwabelana ngamava zethu kunye nabahlobo ekhaya nakumazwe aphesheya, njengendlela ukwenza ikeyiki ezikhulu imigudu yethu ehlangeneyo. Thina bantu eziliqela waba R & D kwaye samkela imiyalelo OEM.